Ithegi: Ivenkile yokukhuphela kwidijithali
IBig Cartel: I-Ecommerce yamaGcisa
NgeCawa, nge-26 kaJanuwari 2014 NgeCawa, nge-26 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Eyilwe ngo-2005 ukunceda umququzeleli wabo ukuba athengise ukuthengiswa kweqela lakhe, iBig Cartel ngoku likhaya labaculi abazimeleyo abangama-400,000 kwihlabathi liphela. Iqonga labo le-ecommerce lakhiwe ngokukodwa ukunceda abaqulunqi ukuba bafumane iimveliso zabo kwi-intanethi. Nantsi ividiyo evela komnye wabathengi babo, Phila ixesha elide, umyili wempahla. IBig Cartel ibonelela ngezi zibonelelo zilandelayo kunye neempawu: ukuseta ngokukhawuleza -Fumana ivenkile elula kwi-Intanethi kwimizuzu. Isebenziseka ngokulula-zibonelela nge-